सपना नदेख्ने र योजना नबनाउने आदत नेपालीमा व्यापक छ « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
सपना नदेख्ने र योजना नबनाउने आदत नेपालीमा व्यापक छ
प्रकाशित मिति : २०७६, २७ मंसिर शुक्रबार १०:३३
मानिसका सामाजिक सबन्धहरुनै समाजका एकताका आधार हुन, र विकासका आधार पनि हुन् । मानिसका समाजिक सबन्धको प्रारुप शिक्षाले निर्माण गर्ने गर्छ । अक्सर, मानिसको स्वाभाव बिर्सनु पर्ने कुरा याद गरिरहने र सम्झनु पर्ने कुरा बिर्सने प्रवृत्तिको हुन्छ । शिक्षाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेकै नागरिकलाई के याद राख्ने र के बिर्सने हो सिकाउने हो । नेपाल यही कुरामा फेल भयो भन्ने कुरा नेपालका नेताले र जनताले बुझिदिए देश अगाडि बढने थियो ।
१. शिक्षाले मानिसको गुणात्मक प्रतिस्पर्धा बढाउँछ । अर्थात् मानिसमा प्रोफेसनालिजम (उत्पादकत्वपूर्ण व्यावसायिकता)को विकास गर्छ । अतः हरेक विद्यार्थीलाई उसको क्षमता वृद्धि गर्न आतुर पार्ने र आफूमा पुरै लगानी गर्ने प्रेरणा भर्न सक्नु राष्ट्रको विकासको पहिलो खुट्किलो हो । केही दशक अगाडिसम्म हामीसँगै भएको थाइल्यान्डलाई हेर्दा पनि यो देखिन्छ । विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरुको अध्ययनमा लगाव अत्याधिक देखिन्छ, जो हाम्रोमा छैन ।
२. विद्यार्थीमा व्यवसायिकता विकासको चाहना कमजोर छ, नेपालमा । मैले अरु भन्दा उन्नत हुनुपर्छ भन्ने सोच कमजोर छ, हाम्रोमा । त्यसैले अवसरको प्रयोग नगर्ने तर सफलता खोज्ने प्रवृत्ति धेरै छ। नेपाली युवामा सफलताको कडी अवसरको सही प्रयोग हो भन्ने बुझाइ छैन । त्यसैले, धेरैले आफ्नो शिक्षाको विकासलाई अधुरो छोडेर सफलताको आकांक्षा गर्छन् । केही भएन भने “बिदेश“ को सपना त जीवन को उद्देश्य नै भैसक्यो ।
३. यिनै कमजोरीले नेपाली समाजले विकराल सामजिक समस्याहरु भोग्न थालेको छ । परिवार बिश्रृखंलित भैरहेका छन् । देशमा बिज्ञहरुको अभाव छ, पढेलेखेका धेरै छन् जान्ने मानिस थोरै छन् । छोराछोरीको पालणपोषण चुनौतीपुर्ण बनेको छ । सम्बन्ध बिच्छेद समस्याका रुपमा अगाडी आएको छ र यस्मा नाजायज लेनदेनले प्रश्रय पाएको छ । फेरिपनि यस मनोबिज्ञानका पछाडि बिदेशको अवसर रहेको छ ।
४. सपना नदेख्ने र योजना नबनाउने आदत नेपालीमा व्यापक छ । पढ्ने किन ? अरु पनि कलेज गका छन् त्यसैले । घर बनाउने किन, एउटा घर त चाहिन्छ भन्छन् त्यसैले । विवाह गर्ने किन, एक पल्ट गर्नै पर्छ भनेर । योजना कसैको हुँदैन । यी योजनाहिन कर्मले नै नेपालीलाई कमजोर बनाएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ।
समृद्ध समाजको अवस्थाले योजनाबद्ध विकासको खोजी गर्छ । तर त्यो मानिसलाई योग्य बनाउने शिक्षाको अभावमा पूरा हुने कुरा होइन । उच्च गुण सम्पन्न शिक्षाको अभावमा शिक्षित मानिसले अल्पज्ञान बोक्छ । उसले आफ्नो भलाइ मेहनतबाट होइन, स्वप्न कल्पनाबाट पूरा गर्न खोच्छ। अल्पज्ञानले मानिसलाई घमण्डी र स्वार्थी बनाउँछ । नेपालको अहिलेको अवस्था यसकै परिणाम हो।
राजनीति भ्रष्ट हुनुको कारण पनि यही हो । नेपाली समाजका सम्बन्धहरु निरन्तर धारासायी भैरहेको कारण पनि यही हो । नेपालमा अहिले एक थोक पटक्कै गर्न सकिन्न, त्यो हो विश्वास । जुन समाजमा बिश्वास संकटमा हुन्छ, त्यहाँ मानिसका भित्री र बाहिरी दुई रुप हुन्छन् । ऊ जे भन्छ त्यो गरिरहेको हुन्न, जे गरिरहेको हुन्छ त्यो उ भन्दैन । नेपालीहरुको यो दुई अनुहारको अवस्था केबल उन्नत शिक्षाले मात्र सम्बोधन गर्न सक्छ ।